Maxaa loola jeedaa halista amaahda? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks khatarta credit
Waa maxay khatarta deynta?
Waxaad heli doontaa ereyga khatarta credit mar hore u malaynayaan waxa ay tahay wax walba oo ku saabsan. Waqtiga gaarka ah ee gaarka ah, wuxuu qeexayaa khatarta deynta ee khatarta bangiyada ee bixinta amaahda amaahda. Gaar ahaan, qeexitaankan waxaa loola jeedaa khatarta caadiga ah ee deynka ee ku saabsan qiimaha madax furashada iyo maqnaanshahooda. Dulsaarka iyo amortiska ayaa si siman u saameeya khatarta deynta, iyo dulsaarka dulsaarka ee bangiyada guud ahaan ayaa sidoo kale laga hadlaa halkan. Tixgelin fikradda khatarta deynta ee bangiga waa fikradda dib u soocelinta deynta. Sida dammaanad, sheyga hantida waxaa loo isticmaalaa halkan si loo helo dib-u-qiimeynta deynta. Khatarta dayntu waxay ku xiran tahay ereyga amaahda amaahda iyo qiyaasta halista ah ka hor inta aan la bixin bangiga.
Khatarta deynta iyo kala qaybinta qaybaha
Halista sida muddo waxaad ogaan doontaa, halista shil, halista ay fashilantay oo ay ku fashilmeen in heshiis aan la ixtiraamo. Sidaa daraadeed waa had iyo jeer ku saabsan qadarinta deynta marka khatarta deynta lagu sheego. Bankiga waa inuu had iyo jeer ku daraa qiimeyntaada iyo xisaabintaada keeska ugu xun, dib u bixinta amaahda ayaa dhici karta. Imtixaanka marxaladda waji-socodka ee macaamiisha waxaa lagu qabtaa halkan. Hay'adaha Deymaha ayaa bixiya macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka halista suurtagalka ah iyo diiwaanada dareenka hore ee deynta. Tusaale ahaan, haddii lacag biilasha oo dhan on time, waxaa jira entries xun ee Schufa ama failure xataa guud ee credit ah ee la soo dhaafay waxaa idiin timid. Baanka, ama, halkii bangiyada, si xoogan ayaa loo xiraa halkan waxayna isticmaalaan xogtan si markaa laguugu qiimeeyo macaamil ahaan. Sidaa daraadeed, falanqaynta khatarta deynta ee loo yaqaan 'credit risk risk' waxay u qaybsantahay qaybo kala duwan Sidaas daraadeed ayaa had iyo jeer khatar gaar ah leh in deyn uu ku guuldareysto. Halkan, bangi u dhigma, oo ku siinaya deyn, wuxuu ku salaysan yahay tilmaam iyo xaqiiqooyin. Baanku had iyo jeer wuxuu qiimeeyaa khatarta deynta iyo qiimeynta suurtogalnimada in la badalayo.
Shuruudaha la xiriira khatarta deynta
Dhanka kale, shuruudo badan ayaa la xiriira deynta iyo khatarta. Dhanka kale, dayn kasta wuxuu halis halis ah ka abuuraa bangiga. Waayo, waxaad, tani waa la fahmi karo, sababtoo ah adiga ayaa mas'uul ka ah sida qofka qaba dakhligaaga iyo hantidaada amaah this aad dalbato oo aad ka dibna ansixiyay. Bangiyada, si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin macaamiisha badan iyo ganacsiga muhiimka ah ee bangiyada samaynta lacagta waa ganacsiga amaahda. Sayidka, halista iyo hal-gaadhista ah ku dar in aad baxdo oo dhan macaamiisha qaataan deyn bangiga halis mugga a. Banks dhalin saabsan Geschäftsprkatiken balli aad u badan oo ah halisaha iyo sidoo kale waxaad ogaan doontaa ka ee la soo dhaafay in bangiyada inta badan siin deyn in ku dhowaad keentay in burbur ee bangiyada. Sidaa daraadeed deynta shakhsiyeed waxay leedahay khatarta deynta, laakiin sidoo kale kuwa codka bixiya dhammaan deynta la siiyo bangiga ayaa keena halis guud. Khatartaas waxay sidoo kale u qaybsan tahay halista faafidda, maadaama bangigu uu amaahda kala duwan u leeyahay khatar aad u kala duwan. Deymaha gaarka loo leeyahay khaasatan khatarta ayaa leh khatar aad u sareysa. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ogaataa in bangigu uu caymis ka galo khatarta deynta ah. Haddii ay dhacdo in aadan dib u bixinin amaahdaada, bangigu si fudud ayuu u xalliyaa caymiskan ama wuxuu qiimeeyaa deynta lagu leeyahay. Bangiyadu waxay sidaas u yihiin si wanaagsan oo loo bixiyay bixiyeyaasha amaahda bixiya, si kastaba ha ahaatee, halistaas waxay noqon kartaa musiibo bangiyada. Waxaad hadda ogtahay waxa khatarta ah.
Rating: 5.0/ 5. Laga soo bilaabo codadka 1.
Maqaalka horecredit Transfer
Maqaalka xigtaamaah Trust